Been iyo Hadal Meelna ma Gaaraan | allsanaag
Been iyo Hadal Meelna ma Gaaraan
Madaxweeynaha Maamul Goboleedka Hargeeysa, Muuse Biixi , ayaa dib ugu soo noqday magaalada Burco. Hadaba, marar badan ayaa maamulkaas loo sheegay in beesha Warsageli aysan shaqo ku laheen ka mid ahaanshaha maamulka Hargeeysan, ayna wax ka dhisteen maamulka Puntland.
Arrintaas ayaa waxaa maanta caddeeyay Madaxweeynaha Maamul Goboleedka Hargeeysa, Biixi, oo garawsaday in Warsangeliland aysan shaqo ku laheen maamulkooda, waana ineey dhamaataa sheegashada aan waxba soo kordhineen, balse ku ah maamulkaas waqti lumis.
Dhinaca Hoose waa Madaxweeynaha Puntland oo booqanaya Dhahar iyo musharixiinta oo Puntland oo booqanaya Badhan. Hadaba, maamulka Hargeeysa miyaa dhulkaa ka talliya, mise shacabka Puntland, afse dhul malagu qabsan karaa?
← Gaas oo Gaaray Dhahar Daawo sawirada sida Gaas loogu soo dhoweeyey degmada Dhahar →